Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Wadanka Norway oo Kulankii Billaha Ahaa Iskugu Timid.
Jaaliyada Wadanka Norway oo Kulankii Billaha Ahaa Iskugu Timid.
Jaaliyada Somalida Ogadenya ee wadanka Norway ayaa maanta ooy taariikhdu tahay 25/4/2015 iskugu timid shirkeedii billaha ahaa kaasoo lagaga wada arinsaday wixii Jaaliyada uqabsoomay mudadii lasoo dhaafay. shirka waxaa furay Gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Khaliif Cabdi Cali oo ajendaha shirka lawadaagay xubnihii shirka kasoo qaybgalay.
Shirkan ayaa lagu qaadaa dhigay hawlihii Jaaliyada uqabsoomay taasoo ay kamid ahaayeen arimaha abaabulka bulshada iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa Jaaliyada iyo shacabka Somalida Ogadenya. Dhanka kale waxaa diirada lasaaray dardar galinta iyo kor uqaadista waxqabadka xubnaha Jaaliyada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa kaalinta kaga aadan halganka Somalida Ogadenya.
Waxaa madasha shirka laga soojeediyay afkaar iyo talooyin dhaxal gal ah oo uhorseedi karta kamidho dhalinta hirgalinta qorshe yaasha udajisan Jaaliyada. Maamulka iyo hawlwadeenada kala duwan ee Jaaliyada S.Ogadenya ee wadanka Norway ayaa muujiyay furfurnaan iyo waliba ineey kutalaabsato tub qeexan oo lagu horumarin karo hawlaha halganka. Waxay dhamaan xubnihii shirkan kasoo qaybgalay hoosta kaxariiqeen xoojinta xidhiidhka iyo iskaashiga kadhexeeya Jaaliyada iyo shacabka S.Ogadenya ee kudhaqan wadanka Norway.
Waxaa kaloo lagaga hadlay kulankan caadiga ah ee Jaaliyada udiyaar garoowga Shirwaynaha Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee sanadlaha ah oo lagu qaban doono wadanka Norway sanadkan dhexdiisa haduu ilaahay yiraahdo. Xubnihii shirka kasoo qaybgalay oo meelo kala duwan kasoo kicitimay ayaa muujiyay ururnimo, iskaashi iyo niyad samaan aad uqiima badan. kulankan ayaa kusoo dhamaaday guul iyo isfahan guud taasoo uhorseeday in laga sal gaadho dhamaan ajendeyaashii kulankan loosoo agaasimay.